စက္ကန့် ၆၀ အတွင်းအကြောင်းအရာမည်မျှထုတ်လုပ်နိုင်သနည်း။ | Martech Zone
အများအားဖြင့်ခင်ဗျားမကြာသေးခင်ကတင်သည့်တင်ဆက်မှုတွင်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသည်ကိုသတိပြုမိလိမ့်မည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းနေ့စဉ်ထုတ်ဝေမှုသည်ကျွန်ုပ်၏ဒီအဲန်အေ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေစဉ်ကျွန်ုပ်သည်ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်ပိုမိုသောအင်္ဂါရပ်များပံ့ပိုးပေးရန်စိန်ခေါ်ခံရသည်။ မနေ့ကဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည် site နှင့်သက်ဆိုင်သော whitepaper အကြံပြုချက်များကိုပေါင်းစပ်ရန်စီမံကိန်းတစ်ခုကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ခန့်ကစီမံခန့်ခွဲခဲ့သောစီမံကိန်းဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်ရေးသားထားသောအချိန်ကိုယူပြီး ၄ င်းကို coding time သို့ပြောင်းခဲ့သည်။
ကိုယ့်ကိုသတိရလား? အများဆုံးဖွယ်ရှိမဟုတ် ... အံ့သြဖွယ်အကြောင်းအရာထုတ်ဝေထွက်ရှိအရင်းအမြစ်များတစ်တန်ရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အကောင်းဆုံးအဖြစ်ထင်ရှားသည်ဟူသောထင်ယောင်ထင်မှားမဟုတ်ပါ - ကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုဆက်လက်လေ့လာရန်ဆက်လက်ရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများကိုမျှဝေခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ကိုစာရင်းသွင်းပြီးနောက်လိုက်သူများအားပညာပေးရန်ကူညီပေးနေခြင်းသာဖြစ်သည်။ နှင့်လေ့လာပါ။
သူကပြောပါတယ်, ထုတ်လုပ်ဆူညံသံများ၏အသံအတိုးအကျယ်နားမထောင်သည် ... ကပိုကောင်းလာပြီမဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါရှေးရှေးမှာ Moz သည် BuzzSumo နှင့်ပြည့်စုံသောအကြောင်းအရာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည် တွေ့ရှိခဲ့
အများစု စီးပွားရေးနှင့်ဆိုင်သောပို့စ်များ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူများသည်ရှယ်ယာအနည်းငယ်သာနှင့်ဆက်သွယ်မှုအနည်းငယ်သာရရှိကြသည်။
အားလုံး၏ထက်ဝက်ကျော် စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သက်သော tweets 11 သို့မဟုတ်နည်းပါးလာရှယ်ယာရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီဟာတွေဟာတွစ်တာသုံးစွဲသူတွေရဲ့အမူအကျင့်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကုမ္ပဏီတွေကပြန်လာစရာမလိုဘဲအားထုတ်မှုကိုညွှန်ပြနေတုန်းပဲ။
75% ကျော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပို့စ်များကိုရှိခဲ့ပါတယ် သုညပြင်ပလင့်များ ထို့ကြောင့်ရည်မှန်းချက်မှာအော်ဂဲနစ်ရှာဖွေခြင်းကိုဖမ်းယူခြင်းဖြစ်သည်ဆိုပါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုသည်အော်ဂဲနစ်အသွားအလာကိုရရှိရန်စိတ်ပျက်ဖွယ်ပျက်ကွက်နေကြသည်။
ရေးသားထားသောအကြောင်းအရာ ၈၅% တွင်စာလုံးရေ ၁၀၀၀ အောက်သာရှိသည် စကားလုံး ၁၀၀၀ ကျော် တသမတ်တည်းပိုပြီးရှယ်ယာများနှင့်လင့်များလက်ခံရရှိ။
ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အွန်လိုင်းမဟာဗျူဟာတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည် ပိုးမွှားထိန်းချုပ်မှု ဒီမှာ Indianapolis ၌ကုမ္ပဏီ။ သူတို့၏ယခင်ဗျူဟာသည်ထောင်ပေါင်းများစွာသောအတွင်းကျကျ၊ သော့ချက်ကျသောကြွယ်ဝသောစာမျက်နှာများရှိသော domains များစွာ၏ခေတ်နောက်ကျသွားသည်။ ၎င်းသည် algorithms ကိုလှည့်ဖြားရန်ကြိုးပမ်းရန်လပေါင်းများစွာပြေးခဲ့သောအကြောင်းအရာစက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်အလုပ်မလုပ်ခဲ့ပါ။ အဆိုပါ site ကိုအဆင့်မြင့်ခုန်တက်ပြီးတော့ကစာသားအညွှန်းကိန်းတွင်တွေ့နိုင်တဲ့အချက်ကျဆင်းခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အသစ်မှအဆင့်မြင့်အဆင့်သို့ရောက်ရန်ဒေသဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများနှင့်သူတို့အွန်လိုင်းပေါ်ရှိမည်သည့်ဆက်စပ်မှုကိုမဆိုလေ့လာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်များပြားသောအကြောင်းအရာများစွာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်ထူးခြားသည့်သို့မဟုတ်အသေးစိတ်စာမျက်နှာအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ဆူညံသံကိုထပ်မံထည့်သွင်းမည့်အစားခေါင်းစဉ်တစ်ခုစီကိုသုတေသနပြုပြီးအကြောင်းအရာစာကြည့်တိုက်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည် ပိုးမွှား အဲဒီဟာကိုဟာသတွေနဲ့ရေးသားခဲ့တာ၊ ရုပ်ပုံတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒီနေရာမှာ infographics နဲ့ checklists တွေစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်။
ရလဒ်မှာလများအတွင်း site သည်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ခက်ခဲသောအလုပ်ဖြစ်ပြီးအကြောင်းအရာသည်အချိန်ကုန်ပြီးစျေးကြီးသည်။ သို့သော်ရလဒ်မှာ၎င်းသည်အလုပ်လုပ်သည်။ နည်းသော အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်နိုင်သည် သာ. ကြီး အားထုတ်မှုကထဲသို့သွင်းသောအခါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရလဒ်များကို။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာဒီအချက်အလက်တွေကိုကြည့်ပြီး ၀ က်ဘ်ပေါ်မှတစ်မိနစ်အတွင်းအကြောင်းအရာဖန်တီးမှုလမ်းကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမယုံနိုင်စရာအခွင့်အလမ်းတစ်ခုရှိနေသည်။ ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာနှင့်သင့်ထုတ်လုပ်ပါ ရှင်ဘုရင်အရာ၌ချီးမြှောက်ရမည် pawn အကြား။
ကျွန်ုပ်တို့၏ '60 စက္ကန့် 'အချက်အလက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဝက်ဘ်ပေါ်ရှိတစ်မိနစ်အတွင်းဖြစ်ပျက်ပုံကိုပုံဖော်သည်။ စက္ကန့် ၆၀ မျှအတွင်းပေးပို့လိုက်သောဂူးဂဲလ်ရှာဖွေမှုအရေအတွက်၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပို့စ်များနှင့် WhatsApp မက်ဆေ့ခ်ျများအမှန်တကယ်ထူးခြားသည်! ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကပထမအကြိမ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးပါပြီ၊ ၎င်းကိုလွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်ကိန်းဂဏန်းများကိုပြသခြင်းအား ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်တင်ပြပြီးပါပြီ။ ရောဘတ်အယ်လန်, Smart Insights ။
Tags: 20142015201660 စက္ကန့်အကြောင်းအရာဖန်တီးခဲ့သည်အကြောင်းအရာခေတ်ရေစီးကြောင်းတစ်နှစ်လျှင်အီးမေးလ်ပမာဏအီးမေးလ်ကတစ်မိနစ်အတွင်းအီးမေးလ်များကိုFacebook ကfacebook ပို့စ်များတစ်မိနစ်လျှင်ဂူးဂဲလ်ရှာဖွေမှုများအကြောင်းအရာနာရီinfographicတစ်မိနစ်လျှင် instagramlinkedinမက်ဆေ့ခ်ျများပို့ပြီးတစ်မိနစ်ထုတ်ဝေရေးသားချက်များလူမှုမီဒီယာstatsပို့ပြီးစုစုပေါင်းအီးမေးလ်များတစ်မိနစ်လျှင် tweetsတွစ်တာအပ်လုဒ်တင်ထားသောWhatsAppနှုတ်ကပတ်တရားတော်အရေအတွက်wordpress ပို့စ်များyoutube က
ဂူဂဲလ်၊ Bing၊ Yelp နှင့်ပိုမိုသောအရာများအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်လင့်ခ်များကိုမည်သို့တည်ဆောက်ရမည်နည်း။
Autopilot သည်ထိုးထွင်းသိမြင်သူ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ဖောက်သည်တစ် ဦး ၏ခရီးသွားလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်သည်